Global Voices teny Malagasy » Japana: Ny ao Tokyo taorian’ilay horohorontany · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 11 Marsa 2011 15:38 GMT 1	 · Mpanoratra Tomomi Sasaki Nandika avylavitra
Sokajy: Japana, Voina
Ny Zoma, 11 Martsa 2011 tamin'ny 2:46:23 tolakandro ora any an-toerana, horohorontany manana tanjaka 8.9 no niantraika tamin'i Japana , ny goavana indrindra voarakitry ny tantara.
Ora 5 no efa lasa taorian'ny nitrangan'ilay horohorontany, ary maro ireo olona ao Tokyo no miezaka mamonjy fodiana amin'ny alalan'ny dia an-tongotra. Nakatona ny fifamoivoizana an-dalamby ho an'ny androany.
mandeha an-tongotra toy ny olona rehetra eto Tokyo, naato ny fiaran-dalamby, feno ny fiarakaretsaka, fialaharana be ny eny amin'ny fiandrasana fiara fitateram-bahoaka, mila mianavaratra nefa tafahitsoka eto Tokyo ihany. #quake12
Filaharana miandry fiara fitateram-bahoaka, avy amin'i @durf 
Ilay mpampiasa Twitter @oohamazaki  dia manangona ho anaty sarintany araka izay tratrany ao amin'ny Google ny faritra misy asa fanavotana ao an-tanànan'i Tokyo.
より大きな地図で 東京都内避難場所  を表示
Nody ny masoandro fa ireo hotely, sekoly, trano fisakafoanana sy ny maro hafa dia mamoha ny varavarany.
Bunka Fashion College  ao akaikin'ny Fivoahana Atsimo amin'ny Shinjuku mbola manana sakafo ary miomana handray olona amin'ity alina ity.
Iangaviana mba haely ny feo! Manokatra ny efitrano fianarana rehetra ao aminy ny Anjerimanontolon'i Rikkyo amin'ity alina ity. Afaka mankany daholo na iza na iza. @valio aho raha mila fanampiana ianareo.
Sary avy amin'ny mpiara-mamoaka lahatsoratry ny Global Voices amin'ny teny Japoney, Scilla Alleci:
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2011/03/11/14525/
 horohorontany manana tanjaka 8.9 no niantraika tamin'i Japana: https://globalvoicesonline.org/2011/03/11/largest-earthquake-in-recorded-history-in-japan/
 Bunka Fashion College: http://www.bunka-fc.ac.jp/index.html